Friday February 21, 2020 - 21:06:16 in Wararka by Super Admin
Xafiiska Warfaafinta Xarakada Al-Shabaab ayaa soo bandhigay sawirro muujinaya qeyb kamid ah khasaarihii lixaadka lahaa ee ciidamada Maamulka Farmaajo kasoo gaaray weerarkii laba maalin ka hor ka dhacay saldhigga ciidamada ee Ceel Saliini.
Sawirrada oo qeyb kamid ah lasoo gaarsiiyay Shabakada Wararka SomaliMeMo ayaa waxaa ay muujinayaan ciidamada Al-Shabaab oo gabi ahaanba cagta mariyay xeradii Ceel Saliini iyo maydad aad u farabadan oo daadsan gudaha xerada.
Sawirrada ayaa sidoo kale muujinaya qaar katirsan maleeshiyaatkii Farmaajo oo nolosha lagu qabtay, sidoo kale waxaa ka muuqanaya Ciidamadii Al-Shabaab oo xerada si buuxda gacanta ugu dhigay.
Dagaalkii Ceel Saliini ayaa waxaa ku dhintay 42 katirsan maleeshiyaatka Maamulka Farrmaajo waxaana sidoo kale lagu qabsaday gaadiid dagaal iyo hub aad u farabadan.
Qarax Nin Mas'uul ah lagu dhaawacay oo ka dhacay Ceelasha Biyaha.
Al-Shabaab Oo 46 Milyan Ugu Deeqday Qoysas Ku Guryo Waayay Dab Qabsaday Tuulo Hoos Tagta Qoryooley.
Iska hor'imaadyo Khasaara dhaliyay oo maleeshiyaad hubeysan ku dhaxmaray Ceelasha Biyaha.
Al-Shabaab Oo War Saxaafadeed Kasoo Saaray Duqeyntii Xerada Xalane.
Tirada Weerarada Al Shabaab ay Todobaadkii Hore fulisay Soomaaliya iyo khasaaraha ka dhashay oo la ogaaday.
Xarakada Al-Shabaab oo war rasmi ah kasoo saartay weerarka Balidoogle (BAYAAN).
Dhageyso: Wareysi lala yeeshay dagaalyahanii Fuliyay Weerarkii naf hurnimo ee lagu qaaday Xerada Ceel Saliini.
Sawirro: Xuuthiyiinta Oo guul darro taariikhi ah dhaxal siiyay ciidamada dowladda Sacuudiga.